Sidee loo joojiyaa Spam u gudbinta Spam - Talooyin fudud oo ka soo jeeda qulqulka
Boggaga caanka ah sida WordPress ayaa leh sifooyin kala duwan oo ay ku jiraan spam gudbinta sidoo kale loo yaqaan spam referrer. Spam gudbinta ma fududa in la ogaado oo laga yaabo in ay is muujiyaan iyagoo booqanaya warbixinta Google Analyst. Waxay ku dhibtoodaan oo ay adag tahay in la xakameeyo. Si kastaba ha ahaatee, Alexander Peresunko, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Macaamilka, wuu ogyahay sida loo xalliyo dhibaatadan.
Waxaa jira nooc ka mid ah spam u gudbinta oo aan xannibeynin adigoo isticmaalaya hababka caadiga ah sida dib u qorista xeerarka ama xannibaadda htaccess - made in india led tv. Waxaa loogu yeeraa spam referant spam. Habka caadiga ah ee looga takhaluso spam referring spoof waa adag tahay sababtoo ah spam ma haysan karo WordPress dhabta ah. Ma fududa in la helo oo markaa loo yaqaan spam Referral spam.
Astaamaha ugu horreeya ee spam ayaa si fudud loo ogaan karaa Google Analytics oo ka kooban waxyaabo qashin ah oo ku saabsan warbixinta la soo saaray. Waxay samayn karaan isticmaalka WordPress ee niyadjabsan laakiin leh wax yar in la sameeyo si loo joojiyo dhibaatada. Baaritaan ku saabsan asalka iyo soo bandhigidda spam gudbinta Ghost wuxuu leeyahay war wanaagsan oo ku saabsan habka loo xakameyn lahaa nuxurka webka ee niyadjabsan ee saameynaya Google Analytics. Uma baahnid inaad walwalgeliso xitaa marka xeerarka Ngxs dib loo qoro.
Spams gudbinta Ghost ma heli karaan macluumaadka login ee kombiyuutarka, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ka walwasho sidii user ah. Tixraacayaashu marnaba booqo goobta isticmaalka oo waligoodna ma soo bandhigi doonaan inta ay u socdaan kombiyuutarka. Sababtoo ah waxay isticmaalayaan Maareynta Maareynta GAAD, gudbinta waxay soo bandhigi kartaa warbixinta Google Analytics iyadoo ujeedadu ay u oggolaanayso inay isticmaalaan koodhka gaarka ah ee GA si ay ugu dhajiyaan aragtida bogga ee been abuurka ah.
Muddo dheer, dhibanayaashu waxay isticmaalayeen habab badan oo looga hortago dhibaatada iyada oo aan lagu guuleysan. Waxay ku fashilmaan inay fahmaan nidaamka abuuraya spam gudbinta oo sidaas darteed ku fashilmaan inay dagaal galaan. Google Analytics wuxuu leeyahay filter kaas oo fududeyn kara xayiraadda gudbinta gawaarida si aad u sahlan. Codso fiilada si aad u xakameyso gudbinta jahwareerka ah ee muujinaya warbixinta Google Analytics si loo joojiyo in ay soo noqdaan. Isticmaalka shaandhaynta Google Analytics si loo dhigo soo gudbinta Ghost waa nidaam dhib badan markii hore, laakiin aad u fudud marka la helo jihada saxda ah.
Websocodyo dhowr ah ayaa ku siin kara tusaalayaal ka mid ah gudbinta Ghost. Waxaad booqan kartaa Daroor jecel Talyaaniga. Priceg.com, blackhatworth.com, iyo hulfingtonpost.com si aad u hesho tusaale dhowaan ah dhibaatada iyo jimicsiga lagu soo bandhigay xalinta. Dhamaantood waa dhibaatooyinka Google Analytics ay xannibi karaan si ay u hubiyaan warbixinta oo dhameystiran. Dadka qaar ayaa kugula talin lahaa isticmaalka Semalt in ay ka hortagaan sirta gudbinta Ghost ka dib markii la dalbado qadar kasta oo qeexaya qaanuunka sababtoo ah ma fahmayaan in uu yahay ciriiriye websaydh.
Habka la soo bandhigay waa mid sahlan oo toos ah xitaa kuwa isticmaala kombuyuutarada. Ha ka tagin boggaaga WordPress si ay u soo saaraan warbixinta cirifka Google Analytics sababtoo ah gudbin aan lahayn. Noqo qof caqli badan oo isticmaal miiraha!